Isifinyezo sezinguquko kumigomo yesevisi ye-Google
Lesi sifinyezo kufanele sikusize kuthi uqonde izibuyekezo eziyinhloko esizenzile kumigomo yesevisi yethu. Sithemba ukuthi leli khasi liwusizo, kodwa sikhuthaza ukuthi ufunde imigomo ngokuphelele.
Lesi sigaba sichaza inhloso yemigomo futhi inikezela ngokubuka konke kwezigaba zakho eziyinhloko.
Lesi sigaba sisha
Singeze izixhumanisi kumadokhumenti asiza ukwenza imigomo, kufaka phakathi ezinye izinto ebesihlala sizikholwa ukuthi ziliqiniso kanye nokubuka konke kwemisebenzi yebhizinisi ye-Google
Lesi sigaba sikhomba igama nendawo yenkampani osebenza nayo futhi nenikezela ngamasevisi owasebenzisayo.
Lesi sigaba sichaza izimfuneko zobudala ezisebenza ekusebenziseni amasevisi e-Google.
Singeze isixhumanisi kuzimfuneko zobudala ezithile ukuphatha i-akhawunti yakho ye-Google
Uma ungumzali noma umnakekeli osemthethweni, sichaze ukuthi ubophezeleke nini emsebenzini wengane yakho kumasevisi
Lesi sigaba sisiza ukuchaza ubudlelwane phakathi kwakho ne-Google njengoba usebenzisana namasevisi we-Google.
Ukuqinisekisa ukuthi uyaqonda ukuthi sisho ubani uma sikhuluma nge-‘Google’, ‘thina’, ‘thina’ noma ‘kwethu,’ sichazile ukuthi lokhu kusho izinkampani eqenjini le-Google
Singeze isixhumanisi kuhlu lwamasevisi lawo imigomo esebenza khona
Singeza i-Google Chrome, Google Chrome OS, ne-Google Idrayivu kuhlu lwamasevisi lawo imigomo esebenza khona. Ngalolu shintsho, lawo masevisi abuswa imigomo yesevisi kanye nesethi encane yemigomo engeziwe yesevisi ethile. Okwe-Chrome ne-Chrome OS, sicela uvakashele okuthi Isifinyezo se-Chrome ne-Chrome OS sezinguquko ezinkulu.
Lesi sigaba sichaza indlela yethu yokuthuthukisa nokushintsha amasevisi ethu.
Sizibophezele ukukunika isaziso uma izinguquko esizenzayo kwisevisi zibalulekile futhi zingathinta kabi wena (ngaphandle kwezimeni eziphuthumayo ezifana nezimfuneko zomthetho)
Lesi sigaba sichaza isibopho sakho uma ukhetha ukusebenzisa amasevisi we-Google.
Singeze isixhumanisi ekhasini lemigomo engeziwe yesevisi ethile eyenza kubelula ukuthola yonke imigomo yokusebenzisa esebenza kwisevisi ethile
Singeze izixhumanisi kwezinye izinqubomgomo izinsiza
Sichaze eminye imithetho eyisisekelo yokuziphatha uma abantu basebenzisana namasevisi wethu
Lesi sigaba sichaza ububanzi bezimvume (noma ilayisense) osinika lona ukukhetha ukwabelana ngokuqukethwe namasevisi ethu.
Senze kalula isakhiwo nolimi, futhi sanikezela ngezibonelo ukwenza ilayisense libelula ukuliqonda. Qaphela ukuthi asishintshi indlela esisebenzisa ngayo okuqukethwe kwakho, noma ukucela izimvume ezingeziwe.
Senze ilayisense laqonda kakhulu. Isibonelo, sicacise ukuthi sizobonisa kuphela okuqukethwe kwakho uma ukwenze kwabonaka kwabanye futhi sachaza ubude besikhathi belayisense.
Futhi sichaze ukuthi yini okungambozwa yilayisense. Isibonelo, ilayisensi alithinti amalungelo akho obumfihlo.
Lesi sigaba sinikezela ngolwazi mayelana nokudala i-akhawunti ye-Google nezibopho zakho uma udala eyodwa.
Singeze isixhumanisi kuzimfuneko zobudala ezidingeka ukudala i-akhawunti ye-Google, kanye nensiza ukukusiza ukuthi udale i-akhawunti
Singeze isixhumanisi Ukuhlola kokuvikela, ukukusiza ukuthi ugcine i-akhawunti yakho ye-Google ivikelekile
Lesi sigaba sichaza ukuthi uma usebenzisa amasevisi engxenyeni yenhlangano, umlawuli waleyo akhawunti ye-Google angaba nokulawula ngendlela osebenzisa ngayo amasevisi.
Lesi sigaba sichaza indlela esixhumana ngayo nawe mayelana namasevisi ethu nendlela esisebenzisa ngayo impendulo yakho mayelana namasevisi wethu.
Lesi sigaba sichaza ukuthi njengoba usebenzisa amasevisi we-Google, ungabona (1) okuqukethwe kwakho, (2) okuqukethwe kwe-Google, kanye (3) nokuqukethwe okuhlala kwabanye abantu nezinhlangano. Sikunikezela ngowlazi oluphathelene nalokho okuqukethwe, ukuthi lokho okuqukethwe kungasetshenziswa kanjani, nokuthi ungaxhumana nathi kanjani ngezikhalazo.
Singeze isixhumanisi ekhasini Google Brand Permissions, esichaza amazinga wethu webhrendi kanye nemvume ozoyidinga uma ungathanda ukusebenzisa ibhrendi yethu
Lesi sigaba sichaza isofthiwe ongayithola kumasevisi wethu, futhi sichaza izimvume ezinikwe kuwe zokusebenzisa lelo softhiwe.
Senze kwaba lula incazelo yelayisense esikunikeza yona
Uma kungaba khona izinkinga nokungazwani
Lesi sigaba sichaza imiqondo yezomthetho esungula okulindelwe nezibopho uma kungaba khona izinkinga.
Sisebenzisa ulimi olusobala ukuze sichaze ukuthi, ngokomthetho, unelungelo (1) elithile lekhwalithi yesevisi, kanye (2) nezindlela zokulungisa izinkinga uma izinto zingahambi kahle, nokuthi Imigomo ayikhawuleli futhi ayithathi lawo malungelo
Lesi sigaba sikunikeza ngesiqinisekiso, okuyisiqinisekiso sokuthi umkhiqizo noma isevisi izosebenza ngezinga elithile.
Sizinikele ekunikezeni amasevisi ethu sisebenzisa ikhono nokunakelela okuzwakalayo
Lesi sigaba sikunikeza ngokuziqhathulula okucacisa nokukhawulela izibopho zethu zezomthetho ngaphansi kwemigomo nemigomo yesevisi ecacisiwe engeziwe.
Lesi sigaba sichaza izibopho ezinamandla esimweni sezinkinga — izibopho kini nobabili wena naku-Google. Isibopho sezomthetho ukulahlekelwa okuvela kusukela kunoma iluphi uhlobo lwemfuneko yezomthetho. Le migomo ikhawulela kuphela izibopho zethu njengoba kuvunyelwe umthetho osebenzayo.
Sicacise ukuthi sinesibopho kuphela samalungelo nezibopho zezomthetho ezichazwe kumigomo, imigomo engeziwe ecacisiwe yesevisi, kanye nezinto ezingakwazi ukukhawulelwa ngumthetho
Sicacise ukuthi asikhawuleli isibopho sethu sezomthetho kuzinto ezithile, ezifana nokufa noma ukulimala komuntu, ukukhwabanisa, ubudedengu obukhulu kanye nokungaziphathi kahle ngokuzithandela
Kubasebenzisi bebhizinisi nezinhlangano, singeze ulimi olusha olumayelana nokuthi sinesibopho sani uma kwenzeka kuba nezinkinga, okufaka ukukhuphula inani lemali ongaphinde ulithole kusukela kithi nokucacisa izinto i-Google engenaso isibopho sazo
Sicacise isivikelo sokuthi abasebenzisi bebhizinisi nezinhlangano zisinikeza ngokuhambisana nokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamasevisi noma ukuphulwa kwemigomo noma imigomo ecaciselwe isevisi
Lesi sigaba sichaza izizathu zokuthi kungani singasusa okuqukethwe kwakho kusukela kumasevisi ethu noma simise ukufinyelela kwakho kumasevisi e-Google.
Sicacise izimo lapho singasusa khona okuqukethwe kwakho nokuthi kunini lapho singamisa khona okwesikhashana noma sinqamule ukufinyelela kwakho kumasevisi e-Google
Sizimisele ukukwazisa ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kokuthatha noma isiphi isenzo lapho kunokwenzeka okuphusile futhi nokuchaza okunye okuhlukile okunomkhawulo
Sifake isixhumanisi senqubo yesikhalazo uma ucabanga ukuthi simise i-akhawunti yakho ngephutha.
Lesi sigaba sichaza ukuthi yimiphi imithetho nezinkantolo esizokusebenzisa ukuxazulula noma yiziphi izimangalo ezingokomthetho.
Lesi sigaba sichaza amalungiselelo avamile asebenza Kumigomo.
Sicacise ukuthi ayikho into Kumigomo ehloselwe ukuvimbela noma yimaphi amalungelo ongase ube nawo ngaphansi komthetho.
Sicacise ukuthi kungani singase senze izinguquko Kumigomo noma kumigomo eyengeziwe yesevisi ethile. Manje uzothola isaziso sangaphambi kwesikhathi kusuka kithi uma sizokwenza ushintsho olubalulekile, ngaphandle uma siqalisa isici esisha noma isevisi, noma uma kunesimo esiphuthumayo.
Manje uzothola isaziso sangaphambi kwesikhathi kusuka kithi uma sizokwenza ushintsho olubalulekile, ngaphandle uma siqalisa isici esisha noma isevisi ethandekayo kubasebenzisi, noma uma kunesimo esiphuthumayo.
Lesi sigaba sichaza amagama ayinhloko avele Kumigomo.
Imibuzo evamise ukubuzwa
Kungani ushintsha imigomo yakho yesevisi manje?
Sithuthukisa imigomo yethu yesevisi futhi siyenza ukuthi kube lula kuwe ukuyiqonda. Lezi zinguquko zibonisa indawo yokulawula ekhulayo futhi namandla ethu aqhubekayo okwenza kube lula indlela esixhumana ngayo namabasebenzisi.
Yiziphi izinguquko ezinkulu?
Sicela ubone isifinyezo sezinguquko ngenhla ngohlu lwemininingwane yezinguquko zeMigomo Yokusebenza yethu. Ngamafuphi, nakhu okushiwo yilesi sibuyekezo kuwe:
Ukufunda okuthuthukisiwe: Njengoba Imigomo yethu isawumbhalo osemthethweni, senze okusemandleni ukuyenza ibelula ukuyiqonda, kufaka phakathi ngokungeza izixhumanisi kulwazi olubalulekile nokunikezela ngezincazelo.
Ukuxhumanana okungcono: Sichaze kahle ukuthi sizozenza nini izinguquko kumasevisi ethu (njengokungeza noma ukususa isici) nokuthi sizokhawulela nini ukufinyelela komsebenzisi. Futhi sizokwenza okuningi ukukwazisa uma ushintsho luthinta kabi umuzwa wakho kumasevisi ethu.
Ukungeza i-Google Chrome, Google Chrome OS ne-Google Drive kumigomo: Imigomo yethu ethuthukisiwe manje ifaka i-Google Chrome, Google Chrome OS, ne-Google Drive, nazo ezinemigomo ethile yesevisi nezinqubomgomo ukukusiza ukuthi uqonde okuhlukile kulawo masevisi.
Azikho izinguquko kwinqubomgomo yethu yobumfihlo: Asenzi izinguquko kunqubomgomo yobumfihlo ye-Google futhi asenzanga izinguquko endleleni esiphatha ngayo ulwazi lwakho. Njengesikhumbuzi, ungahlala uvakashela i-Akhawunti ye-Google ukubuyekeza izilungiselelo zobumfihlo nokuphatha indlela idatha yakho esetshenziswa ngayo.
Ingabe isho ukuthini imigomo yesevisi ebuyekeziwe kubumfihlo bami nedatha?
Asenzanga izinguquko ngendlela esiphatha ngayo ulwazi lwakho. Ungafunda ngezenzo zethu zobumfihlo ngokubuyekeza Inqubomgomo Yobumfihlo. Futhi njengesikhumbuzi, ungahlala ubuyekeza izilungiselelo zethu zobumfihlo futhi uphathe idatha yakho nokwenza ngokwezifiso ngokuvakashela i-Akhawunti ye-Google yakho.
Kungani uhambisa i-Google Drive, Google Chrome ne-Google Chrome OS kumigomo yesevisi ebanzi ye-Google? Ingabe lokhu kusho ukuthini ekusebenziseni kwami kwale mikhiqizo?
Akukho okushintshayo mayelana nendlela esiphatha ngayo ulwazi lwakho ku-Google Chrome, Google Chrome OS, naku-Google Drayivu. Ngokuqaliswa kwemigomo yesevisi ebuyekeziwe, ukusebenzisa kwakho le mikhiqizo kubuswa Imigomo Yesevisi ethuthukisiwe ngaphezu kwemigomo yayo engeziwe yesevisi ethile nezinqubomgomo. Lokhu kwenza kube lula ukuqonda imigomo evamile esebenza kumasevisi amaningi we-Google kanye nemigomo nezinqubomgomo ezingeziwe zesevisi ethile esebenza kumikhiqizo ethile, njenge-Google Drayivu, i-Google Chrome, ne-Chrome OS. Izinqubomgomo zethu zobumfihlo azishintshi. Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Google isasebenza olwazini esiluqoqa kuyo yonke imikhiqizo ye-Google, okufaka phakathi i-Chrome, i-ChromeOS (njengoba kuchaziwe kokuthi Isaziso Sobumfihlo), ne-Drayivu.
Ingabe lokhu kukhona okuphathelene ngakho ne-European Union Copyright Directive noma i-GDPR?
Cha, lezi zinguquko aziphathelene ne-European Union Copyright Directive noma i-General Data Protection Regulation (GDPR).
Kuzokwenzekani uma ngingamukeli imigomo yesevisi ebuyekeziwe?
Uma ungavumelani nemigomo emisha, kufanele ususe okuqukethwe kwakho futhi uyeke ukusebenzisa amasevisi. Ungaphinda uqede ubudlelwano bakho nathi noma kunini ngokususa i-akhawunti yakho ye-Google.